यौन सम्पर्कबाट कोरोना भाइरस सर्ला त ?
मङ्गलबार, जेठ ०४, २०७८ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस नयाँ भएकाले यसबारे धेरै अध्ययन र अनुसन्धान हुन बाँकी छ। संक्रमित व्यक्तिसँग हात मिलाउँदा, अंकमाल र चुम्बन गर्दा थुक र र्याछलका छिटाबाट कोरोना भाइरस अर्को व्यक्तिमा सर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
त्यसैले भाइरसको संक्रमणबाट बच्न एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीच दूरी कायम राख्न, हात नमिलाउन, मास्कको प्रयोग गर्न, साबुनपानीले हात धुन चिकित्सकको अनुरोध छ।
कोरोना भाइरस कसरी सरिरहेको छ? यो भाइरस कुन-कुन माध्यमबाट कसरी सर्छ भन्ने विषयमा अझै अध्ययन भइरहेका छन्।
यौन सम्पर्कका माध्यमबाट यो भाइरस अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ कि सक्दैन ? पछिल्लो समय यो विषयमा धेरै जिज्ञासा उठ्न थालेका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन चीनमा गरिएको अध्ययनले पुरुषको वीर्यमा कोरोना भाइरस देखिएको बताउँछन्। तर वीर्यमा भएको कोरोना भाइरस यौन सम्पर्कका माध्यमबाट सर्छ वा सर्दैन भन्ने तथ्य भने अझै प्रमाणित भई नसकेको उनले जानकारी दिए।
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा जोस भ्यान्देलियरले हालसम्म यौन सम्पर्कका माध्यमबाट कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुनै तथ्य फेला नपरेको बताए।
थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालकी निर्देशक डा संगीता मिश्र श्रीमान र श्रीमति दुबैमा कोरोना संक्रमण छैन भने यौन सम्पर्कमा राख्न सक्ने बताउँछिन्।
हालसम्म भएका अध्ययनहरूले पुरुषको वीर्यबाट महिलामा संक्रमण भएको तथ्य फेला परेको छैन। यस्तै संक्रमित महिलाको योनिरसमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि भएको छैन। तर कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्दा चुम्बन आलिंगनलगायत शारीरिक दूरी अत्यन्तै निकट हुने भएकाले र्या्ल र थुकका छिटामार्फत् कोरोना भाइरस सर्न सक्छ।
संविधान दिवसको अवसरमा धनगढीमा स्वास्थ्य परीक्षण